Ntinye Nka Ọhụụ Ọhụụ presents na - egosiputa ọmarịcha nke nchekwube na - eto eto na - eto eto na - adọrọ adọrọ - ndị na - eche ọdịnihu, ndị na - emepụta ihe, na ndị na - ese ihe nke ụwa gị. Akụkọ dị egwu, a na-ahụ anya site na windo 30 karịa ọkwa 5 anya na-enwu site n'ọdịdị dị iche iche nke agba, mgbe ụfọdụ na-apụta na-eso igwe mmadụ ka ha na-elepụ anya n'ike n'ime abalị. N'ime anya ndị a, ha na-ahụ ọdịnihu, onye na-eche echiche, onye na-ahụ maka ihe ọhụrụ, onye na-ese ihe na onye na-ese ihe: ekike ndị echi ga-agbanwe ụwa.
Imebe Ime Ụlọ Azụmahịa
Imebe Ime Ụlọ Azụmahịa Na-anọchi anya echiche ahụ na njirimara n'ozuzu ya n'ụzọ na-agbanwe agbanwe site na iji chekwa ụlọ ahịa, maka ahịa ndị Canada na ndị ahịa Yorkdale. Iji ahụmịhe nke ihe ochie na mpaghara ụwa iji mepụta ma tụgharịa uche ahụ dum. Mepụta ụlọ ahịa nwere ike ịrụ ọrụ, nke ahụ ga-arụ ọrụ nke ọma maka nnukwu okporo ụzọ, oghere dị egwu.
Ime Ụlọ Ememe ugwu North America nke oge a, ulo ezumike, na mbara elu ulo di na Midtown Toronto na-eme emume menu akpukpo ahihia ohuru na nke nnabata. Rthlọ oriri na ọụ Aụ Arthur nwere oghere atọ pụrụ iche iji nwee ọ (ụ (ebe iri nri, ụlọ mmanya, na patio patio) nke na-enwe mmetụta abụọ na sara mbara n'otu oge. Elu ụlọ a pụrụ iche n'ụzọ ọrụ ya bụ ihe eji arụ osisi, nke a rụrụ iji wulite elu ụlọ ahụ, ma na-enwe ọhụụ nke kristal dị n'elu.
Ụlọ A Na-Atọ Ụtọ Maka Ụmụaka
Satọdee 11 Juun 2022
Ụlọ A Na-Atọ Ụtọ Maka Ụmụaka Ihe nlere ulo a bu maka umuaka imuta ma egwu, nke bu ulo zuru oke site n’aka nna di ukwu. Onye rụrụ ya jikọtara ihe dị mma na ihe nchekwa iji mepụta ọmarịcha ma maa mma. Ha nwara ime ụlọ ụmụaka mara mma ma dị nro, ma gbaa mbọ mee ka mmekọrịta dị n'etiti nne na nna na nwa sikwuo ike. Onye ahia ahụ gwara onye mmebe ahụ iji mepụta ebumnuche 3, nke bụ: (1) ihe okike na nchekwa, (2) mee ụmụaka na nne na nna obi ụtọ na (3) ohere nchekwa. Onye na-ese ihe chọtara usoro dị mfe ma doo anya iji mezuo ebumnuche, nke bụ ụlọ, mmalite nke oghere ụmụaka.
Fraịdee 10 Juun 2022
Ụlọ Ime Ụlọ Gịnị bụ ohere maka ụlọ? Onye mmebe kwenyere na ihe okike a sitere n’ihe ndi mmadu choro, inweta nkpuru obi rue uwa. Ya mere, onye mmebe ahụ jiri ọmarịcha di na nwunye ahụ mee atụmatụ nke uwa. Abụọ nke ndị nwe ha hụrụ ihe n'anya na ihe eji edozi ya na ọdịnala ndị Japan. Maka ịnọchite anya ncheta dị n’uche ha, ha kpebiri iji ụdị ederede osisi wee mepụta ụlọ mkpụrụ obi. N'ihi ya, ha nwetara ihe mgbaru ọsọ atọ nkwekọ maka ụlọ a kacha mma, bụ ndị (1) ikuku kwụsịrị, (2) oghere ọha mara mma ma na-adọrọ adọrọ, na (3) oghere dị mma na nke anaghị ahụ anya.
Ụlọ Maka Ncheta
Tọọzdee 9 Juun 2022
Ụlọ Maka Ncheta Thislọ a na-eji osisi na osisi achara edo edo edochi anya ihe osise nke ụlọ. Ìhè ahụ na-esi na mbara ala ọcha ndị gbara ụlọ ahụ gburugburu, na -eme ka ndị ahịa nwee ọnọdụ pụrụ iche. Onye rụpụtara ya na-eji ụzọ dị iche iche edozi nsogbu nke ụlọ a maka ndị ikuku na ebe nchekwa. Ọzọkwa, jikọta ihe ndị ahụ na ebe nchekwa nke ndị ahịa ma chepụta ihe ịchọ mma ma mara mma site na nhazi ahụ, na-ejikọ ụdị pụrụ iche nke ụlọ a.
Tiuzdee 7 Juun 2022
Feiliyundi Ebe Satọdee 2 Julaị
Qwerty Elemental Akpa Aka Fraịdee 1 Julaị
Wood Storm Echichi Desktọpụ Tọọzdee 30 Juun
Ntinye Nka Imebe Ime Ụlọ Azụmahịa Ime Ụlọ Ụlọ A Na-Atọ Ụtọ Maka Ụmụaka Ụlọ Ime Ụlọ Ụlọ Maka Ncheta